Donald Trump Oo Ku hanjabay inuu ka laaban doono Heshiiskii Nuclearka ee Iiraan. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Donald Trump Oo Ku hanjabay inuu ka laaban doono Heshiiskii Nuclearka ee Iiraan.
On Oct 14, 2017 247 0
Madaxweynaha cudurka dhimirka qaba ee Maraykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday inuu iska bixi doono heshiiskii Nuclearka ee Maraykanka iyo qaar kamid ah dowladaha Yurub ay sanadkii 2015 la gaareen dowladda Iiraan.
Trump oo kalimad jeediyay ayaa shaaca ka qaaday in waqtiga ugu munaasabsan uu ka bixi doono heshiiskaas oo uu sheegay inuu ahaa mid sharci darro ah oo dowladda Iiraan u suurageliyay iney yeelato hub Nuclear ah ayna taageerto Kooxo uu ku tilmaamay Argagaxiso.
Hadalka Donald Trump waxaa durba soo dhaweeyey dowlad badan oo uu ku jiro maamulka Aala-Sucuud, maamulka Yahuudda, dowladaha Imaaraatka, Baxreyn, Yaman iyo kuwa kale.
Aala-Sucuud war ay soo saareen waxay ku sheegeen iney taageersanyihiin siyaasadda cusub ee Donald Trump ee ka dhanka ah dowladda Iiraan.
Dhanka kale dowladaha Yurub sida Faransiiska, Jarmalka, iyo Ingiriiska ayaa sheegay iney iyagu iltizaami doonaan heshiiskaas ay dhankooda ka saxiixeen ee lala gaaray dowladda Iiraan.
Bayaan wadajir ah oo ay soo saareen dowladahan waxay ka digeen dhibaatada ka dhalan karta go’aannada uu iskiisa u qaadanayo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
Dowladda Ruushka ayaa iyadana ku biirtay dowladaha ka digay go’aannada cusub ee Trump, waxaana ay sheegtay iney isku dayayso in Donald ay kala hadasho sidii uu uga joogsan lahaa tallaabadaas.
Dowladda Iiraan waxay sheegtay in haddii Maraykanka uu ka baxo heshiiska ay wada gaareen ay ka dhigantahay inuu wada burburay heshiiska oo dhan, waxaana intaas ay ku dartay in haddii ciidanka ilaalada kacaanka ee Iiraan lagu daro liiska Argagaxisda ay ka dhigantahay dagaal lagu iclaamiyay jiritaankeeda.